Duqeyn xalay ka dhacday gobolada Jubbada Dhexe iyo Shabeellada Hoose – Hornafrik Media Network
Duqeyn xalay ka dhacday gobolada Jubbada Dhexe iyo Shabeellada Hoose
Wararka ka imaanaya gobolada Jubbada Dhexe iyo Shabeelada Hoose ayaa sheegaya in xalay duqeyn xoog leh ay ka dhacday degmooyin deegaano ka tirsan labadaasi gobo.
Dad ku nool degmooyinka jilib iyo Bu’aale ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegay in ay xalay maqlayeen daryanka duqeyn diyaaradeed oo ka kala dhacday gudaha iyo daafaha maagaalooyinkaas.
Duqeynta ka dhacday degmada Jilib ayaa waxaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday guri ku yaalla duleedka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, halkaas oo ay daganaayeen saraakiil ajaanib ah oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in duqeymaha ka dhacay Jilib iyo Bu’aale bartilmaameedkoodu uu ahaa horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab, iyagoo sheegay in lagu dilay labo sarkaal oo Kenyaan ah.
Sidoo kale Saraakiisha u hadashay sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay in duqeyn kale ayaa isla xalay ka dhacday xarun tababar oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Shabeellada Hoose, mann sheegin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeymahaas.
Duqeynta gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa la sheegay inlagu bartilmaameedsaday xero tababar oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen inta u dhaxeysa deegaanada Araboow iyo Haaway ee gobolka Shabellada Hoose.
Daadad dad ku dilay Koonfur bari dalka Spain.
Iska hor imaad Askar ka wada tirsan Dowladda ku dhexmaray Dhuusamareeb